Doktora Nezarlaandi isparmii ofiisaatiin dubartoota 49 ulfeesse - BBC News Afaan Oromoo
Biyya Neezarlaands keessatti ogeessi fayyaa sirna walhormaataa tokko sanyii kormaa (sperm) kanuma ofiisaatti fayyadamuun dubartoota 49 ulfeessuun ijoollee irraa horachuun isaa mirkaneeffameera.
Haadhotiin ulfaa'an kuneen isparmii nama isaaniif kennu irra fudhachuuf akka walii galan ta'ullee, ogeessi fayyaa sirna walhormaataa kun garuu osoo isaan hin beekiin dhoksaatti isparmii kan ofiisaa fayyadameera jedhame.
Doktarrichi osoo waggaa lamaan dura du'aan hin boqotiin dura kilinika biyya Neezerlaands keessatti argamu keessa waggoota 30 oliif tajaajilaa tureera.
Dhukkubsattuun barootaaf of wallaalte attamiin ilma godhatte?
Akka qorannoon qeccee sanyii (DNA) mirkaneessetti ogeessi fayyaa maqaan isaa Jaan Kaarbaat jedhamu kun abbaa ijoollee 49 ta'eera.
Ijoollee isaa 49 keessa tokko kan taate Jooy, "Ammaan booda abbaan koo eenyudha jedhee yaadda'uu koo dhaabuu nan danda'a. Abbaan koo waggaa lamaan dura boqoteera, " jechuun haala sana ibsiteetti.
"Barbaacha waggoota 11n booda amma nagaadhaan jireenya koo gaggeefachuu nan danda'a. Amma nagaa argadheera."
Ijoollee 49 bakka bu'uudhaan ogeessi seeraa dhimmicha hordofaa ture Tiim Buwtersimmoo dhimmichi seeratti dhiyaatee waggoota dheeraatiif waan tureef bu'aan qorannoo kan ammaa kuniifi mana murtiin mirkanaa'uun isaa na gammachiiseera jechuudhaan miira isaa ibse.
Goodayyaa suuraa Ijoolleen gari caalan kan dhalatan baroota 1980n keessa ture
Yeroo ammaa kana kan lubbuun hin jirre Dr. Karabaat bara 2017 dhimma kana waliin walqabatee himanni irratti banamee kan ture yommuu ta'u, yeroo sanatti mucaan bifaan himatamaa kana fakkaatu tokko akka ragaatti dhiyeeffamee ture.
Doktorichi kunis dhimma kanaan walqabatanii yeroo umuriin isaanii 89 ta'u ture kan to'atamanii turan.
Yeroo sanattis manni murtii qorannoon DNA akka taasifamuu qabu ajaja kan dabarse yommuu ta'u, hanga adeemsi mana murtii xumuramutti garuu bu'aan qorannoo isaa uummataafis ta'e ijoollee 49 hundaaf ibsamuu akka hin qabne murteessee ture.
Guraandhala darbe keessa akka ibsamu haaluma beelamni qabameefiin bu'aa qorannoo DNA kanas yeroosaatti ibsameera.
Ameerikaa: Narsiin dhukkubsattuu barootaaf of wallaaltee ulfeesse jedhamuun shakkame hidhaa seene